I-beta ye-Android Q yesibini: Fumana zonke iindaba | I-Androidsis
Zonke iindaba ze-beta yesibini ye-Android Q
I-beta yesibini ye-Android Q sele iyinyani. Kwiiveki ezimbalwa emva ukumiliselwa kwe-beta yokuqala Inkqubo yokusebenza, i-beta yesibini sele ifikile kwintengiso. Okwangoku, yiGoogle Pixel kuphela, kuzo zonke iinguqulelo zayo, ezinokufikelela kuyo. I-beta apho sifumana uthotho lweendaba, ukongeza kwizilungiso ze-bug ezazikho kuqala.
UGoogle uyahambelana ishedyuli yokukhutshwa kwe-beta ukuba basibonisile kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo. Ke ukumiliselwa kwale beta entsha ye-Android Q kuza ngakumbi okanye ngaphantsi xa kulindeleke. Emva koko siyakuxelela ngakumbi malunga neendaba ezifakwe kuyo.
Ukongeza ekulungiseni ezinye zeencukuthu esiyifumene kwi-beta yokuqala, le nguqulo intsha ikwazisa ezinye izinto ezintsha ezazifihlwe kweyokuqala. Zilutshintsho oluncinci kunolo besinalo kwi-beta yokuqala, kodwa ziindaba eziza kubaluleka kubasebenzisi abaneGoogle Pixel abanokufikelela kuyo.
1 Yintoni entsha kwi-beta yesibini ye-Android Q
1.1 Iincoko zencoko
1.2 Imvume yokugcina
1.3 Imakrofoni ezikhokelayo
1.4 Isixhobo esinokulungelelaniswa isixhobo
1.5 Ukuhambelana kwii-API zikawonke-wonke
Yintoni entsha kwi-beta yesibini ye-Android Q
UGoogle ufuna ukukhumbuza abasebenzisi ukuba oku I-beta yesibini ye-Android Q isenokuba neziphene. Kuba yinguqulelo yokuqala yenkqubo yokusebenza. Ke abasebenzisi abaza kuyihlaziya kwifowuni yabo, kufuneka bakulungele oku. Kuba eyona nto iqhelekileyo kukuba iimpazamo zifunyenwe malunga noku.
Kwi-beta yokuqala yenkqubo yokusebenza ezi bhola zencoko zazifihliwe. Imalunga nendlela yamandla Fumana okona kulungileyo kwimisebenzi emininzi kwifowuni enye. Njengoko ubona kwifoto, ezinye iibhabhu ezineencoko ezisebenzayo ngalo mzuzu ziya kuboniswa kwiscreen. Ukuze zifikeleleke ngokulula emnxebeni. I-Android Q iya kubonisa onke amaqamza aqokelelweyo, kwifestile yayo aya kusivumela ukuba sincokole, sithumele iifoto, iividiyo okanye iifayile.
Kuwo onke amaqamza sinemifanekiso yeprofayili yaloo mntu, ukuze sikwazi ukwazi ukuba sithetha nabani. Yintoni egqithisile, i icon yemiyalezo eboniswayo esetyenziselwa ukunxibelelana naloo mntu. Kwifoto ungayibona ngokucacileyo.
Inani lezixhobo ezifanelekileyo i-beta ye-Android Q iya kuba nkulu kune-Android P
Utshintsho lwesibini esinalo kule beta ye-Android Q yimvume yokugcina. Kufuneka kunikwe indawo yokugcina, ukuze umdlalo ugqibezele ukufakwa kwayo. Ukusukela ngoku, iiapps kunye nemidlalo ziya kuba nendawo yabucala, apho idatha igcinwa khona. Iiapps kunye nemidlalo enayo okanye efuna ukufikelela kwiifoto zethu, iividiyo okanye umculo kuya kufuneka zisebenzise imvume yokugcina xa zifuna ukufikelela okunjalo.
Le beta yesibini ye-Android Q yazisa ngokusesikweni inkxaso yemakrofoni. Oku kuthetha ukuba iiapps ngoku zinokusebenzisa ii-API zazo ezintsha ezinokuthi zichaze ulwalathiso olukhethiweyo kwimakrofoni xa usenza urekhodo lomsindo. Ke ukuba usebenzisa ifowuni ngaphambili, loo microphone iyasebenza, umzekelo.
Isixhobo esinokulungelelaniswa isixhobo
Sikwafumana inkxaso yokusonga izixhobo kule beta intsha. Into ebalulekileyo, kuba siyabona zingaphi ii-brand ze-Android esele zilungile ii-smartphones ezisongwayo, okanye ngoku ziyasebenza kuzo. Ngale ndlela, i-emulator ye-SDK ye-Android sele ivumela ukulinganisa kokuvula nokuvala ifowuni esongelayo. Ukuze ukwazi ukuhlalutya ukuba iapp iyaziguqula ngokuchanekileyo kubungakanani bescreen kweso sixhobo.
Ukuhambelana kwii-API zikawonke-wonke
Ukugqibela kweendaba kubhekisa kwiiAPIs. Kuba uGoogle ufuna ukuba kusetyenziswe ii-API zikawonke-wonke kuphela. Ke banciphisa ukufikelela kwezinye ii-API ezithile kwezi Android Q betas. Uluhlu luhlaziyiwe ngoku kule beta yesibini yenkqubo yokusebenza. Ke ezinye iindlela zinikiwe, ngaphambi kokuthintela ukufikelela kwazo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Iinguqulelo ze-Android » Zonke iindaba ze-beta yesibini ye-Android Q
Uyenza njani imowudi yasebusuku ngokuzenzekelayo kwi-Twitter